တတ်နိုင်ဇိမ်ခံကားပုဂ္ဂလိကဂျက်ပဋိညာဉ်စာတမ်းပျံသန်းမှုကိုလံဘတ်, ငါ့ကိုအနီးအိုဟိုင်းယိုးပြည်နယ်လေယာဉ်လေယာဉ်ငှားရမ်းခြင်းကုမ္ပဏီဝန်ဆောင်မှု 866-576-7813 ဇိမ်ခံလေယာဉ်ပျံလေကြောင်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအပေါ်ဗလာခြေထောက်ကုန်ကျစရိတ်အပေါ်ချက်ချင်းကိုးကားဘို့ဖြစ်စေစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်, တစ်ဦးလျှော့စျေးစျေးနှုန်းမှာခြေထောက်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးခရီးသွားဗလာနောက်ဆုံးမိနစ်သို့မဟုတ်. ငါတို့သည်သင်တို့သင်၏နောက် destination သည်ခေါ်ဆိုခရကူညီပေးဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်နေပါပြီ 866-576-7813. ကိုလံဘတ်စ်ကပုဂ္ဂလိကဂျက်လေယာဉ်စင်းလုံးငှားလေယာဉ်ခရီးစဉ်ဝန်ဆောင်မှု၏အားသာချက်များကိုမှန်မှန်ပျံသူမည်သူမဆိုမှသိသာများမှာ, လုပ်ငန်းသို့မဟုတ်အပျော်အပါးအဘို့ရှိမရှိ. ကိုလံဘတ်စ်အတွက်ငှားတစ်ဦးကပုဂ္ဂလိကလေယာဉ်ကိုသင်နှစ်သိမ့်ခြင်းနှင့်စတိုင်သွားလာသည်ဟုဆိုလိုသည်မသာ, နှင့်သင်တန်းသင်လိုအပ်သမျှပုဂ္ဂိုလ်ရေးအာကာသနှင့်အတူ, ဒါပေမယ့်လည်းစစ်ဆေးမှုများမှာသူတို့အရှည်လျားလိုင်းများအတွက်နှင့်လုံခြုံရေးဖယ်ရှား, လေဆိပ် Terminal ကိုမှတဆင့်အဆုံးမဲ့လမ်းလျှောက်, နှင့်မြို့တံခါးဝ၌သူတို့အားမသက်မသာထိုင်ခုံပေါ်မှာစောင့်ဆိုင်းနေ. လာသောအခါဘုတ်အဖွဲ့အပေါ်တစ်ဦးကပုဂ္ဂလိကဂျက်လေယာဉ်စင်းလုံးငှားလည်းပုဂ္ဂိုလ်ရေးဝန်ဆောင်မှုကိုဆိုလိုသည်, ကအခမဲ့ဖြစ်ဘို့နှင့်မျှမတို့ဟာအိမ်သာအပြင်ဘက်စောင့်ဆိုင်းနေ.
လေယာဉ်ကိုဂျက်လေယာဉ်စင်းလုံးငှားလေယာဉ်ခရီးစဉ်ကိုလံဘတ်သုံးပြီး၏အခြားကြီးမားသောပေါင်းသင်သွားချင်အတိအကျရှိရာလေယာဉ်ကိုသင်ယူကြလိမ့်မည်ဖြစ်ပါသည်, သင်တို့အဘို့အဆင်ပြေမယ့်သောအချိန်က. အဓိကသယ်ဆောင်ထဲကအတော်များများဟာသူတို့ရဲ့လေယာဉ်ခရီးစဉ်အချိန်ဇယားဖြတ်ပါပြီ, တချို့မြို့ငယ်လေးတွေမှာသာတစ်ဦးသို့မဟုတ်နှစ်ဦးကိုလေယာဉ်ခရီးစဉ်တစ်နေ့တာဝန်ထမ်းဆောင်နေကြ. ထိုအကြှနျုပျတို့ရှိသမြှသောအတွေ့ရခဲသောပထမဦးဆုံးလူတန်းစားသို့မဟုတ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလူတန်းစားထိုင်ခုံကိုရှာဖွေနိုင်ဖို့အတွက်အချို့သောလေယာဉ်ခရီးစဉ်ကိုယူရှိခြင်း၏အယူအဆနှင့်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ကြသည်. ကိုလံဘတ်စ်ကပုဂ္ဂလိကဂျက်လေယာဉ်စင်းလုံးငှားလေယာဉ်ခရီးစဉ်ဝန်ဆောင်မှုနှင့်အတူ, တိုင်းထိုင်ခုံပထမဦးဆုံးအတန်းအစားဖြစ်ပါသည်, သင်လိုအပ်သည့်နေရာနှင့်နှစ်သိမ့်ရာပူဇော်သက္ကာကို. အဘယ်သူမျှမကပိုအားလုံးကိုပထမဦးဆုံးအတန်းအစားထိုင်ခုံယခုရောင်းချခဲ့ပြီကောင်တာများတွင်စစ်ဆေးမှုများမှာကိုပြောသည်ခံရ.
ပုဂ္ဂလိကဂျက်လေယာဉ်စင်းလုံးငှားအပေါ်ပျံသင်ထင်လိမ့်မယ်ထက်အများကြီးပိုပြီးတတ်နိုင်ဖြစ်ပါသည်. ကိုလံဘတ်စ်အတွက်ပုဂ္ဂလိကဂျက်လေယာဉ်စင်းလုံးငှား၏ကုန်ကျစရိတ် ပို. ပင်တတ်နိုင်စေရန်, ငါ့ကိုအနီးရှိနောက်ဆုံးမိနစ်ဗလာခြေထောက်သဘောတူညီမှုကိုရှာဖွေ. လေယာဉ်အချည်းနှီးသောပျံကျသောအခါအချည်းနှီးသောခြေထောက်များမှာ, နောက်ကျောကပေးဆောင် client ကိုကောက်ရန်လိုအပ်သည်အဘယ်အရပ်မှမရ, နှင့်သင်မကြာခဏပိုက်ဆံဤနည်းကိုကယျတငျနိုငျ. သက်သာခြင်း, အဆင်ပြေခြင်းနှင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဝန်ဆောင်မှု - အဘယ်ကြောင့်သင်ကစင်းလုံးငှားလေယာဉ်ပေါ်ပျံသန်းမဟုတ်ဘူး?
ကျနော်တို့ကိုလံဘတ်စမှာအမှုဆောင်ပုဂ္ဂလိကနှင့်အများပြည်သူဂျက်လေယာဉ်ကွင်းတည်နေရာများစာရင်း, သငျသညျအနီးအာကာသလေယာဉ်ပျံလေကြောင်းဝန်ဆောင်မှုအဖြစ် OH ဧရိယာ
ကိုလံဘတ်စ်, အာရှရပင်စီးတီး, Hilliard, Galloway, Groveport, Brice, Lockbourne, Blacklick, Westerville, Reynoldsburg, ထိပ်သီးအစည်းအဝေးဘူတာ, ဒပ်ဘလင်မြို့, Amlin, နယူးအယ်လ်ဘာနီ, တူးမြောင်း Winchester က, Pickerington, ဝဲလ်, Harrisburg, ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်ပွိုင့်, Lewis ကရေးစင်တာ, orient, အနောက်ဂျက်ဖာဆန်, Lithopolis, ဒါဘီ, လွင်ပြင်စီးတီး, Etna, Ashville, Galena, Pataskala, ကာရိုး, Unionville ရေးစင်တာ, အသင်းတော်များ Ville, Baltimore, Johnstown, အာလေဇန္, Sunbury, ဝဲ, တောင်ပေါ်က Sterling, လန်ဒန်, Ostrander, Croton, Millersport, မန်, Kilbourne, Hartford, Irwin, Circleville, Thurston, Williamsport, Stoutsville, Granville, Marysville, ဟေဗြုန်မြို့,, Lancaster, Milford ရေးစင်တာ, Buckeye ရေကန်, Pleasantville, Centerburg, Sedalia, သံလိုက် Springs, Woodstock, Mechanicsburg, Tarlton, အက်ရှလေ, Radnor, ဘရော့ဒ်ဝေး, နယူးဟော်လန်, တောင်ပေါ်က Liberty, Bloomingburg, Thornville, တောင်ပိုင်းဗီယင်နာ, Marengo, Newark, Jacksontown, အနောက် Rushville, Catawba အဘိဓါန်, Clarksburg, Sparta, Rushville, Hallsville, ဒို, မြောက်အမေရိက Lewisburg, သကြား Grove, တောင်ပိုင်း Solon, ဟိသ်, Mingo, Kingston, Fulton, တောင်ပိုင်း Charleston, Bremen, ဥတီဂ်, အမြင်, Richwood, ရေမွန်, စိန့် Louisville က, Rockbridge, cable, Cardington, Jeffersonville, Adelphi, Laurelville, ဝါရှင်တန်တရားရုံး House, Middleburg, အရှေ့ Liberty, Glenford, Somerset, Chesterville, Brownsville, တောင်ပေါ်မှာ Vernon, Milledgeville, အစိမ်းရောင်စခန်း, Frankfort, Martinsburg, လမ်းဆုံစီးတီး, Springfield, Urbana, Gratiot, အနောက် Mansfield, ဂိလဒ်တောင်ပေါ်, Fredericktown, Westville, အက်ဒီဆင်, Zanesfield, တောင်ပေါ်မှာပယ်ရီ, မာရီယန်, Hopewell, ဂမ်းဘီးအား, Logan, Chillicothe, Tremont စီးတီး, Bladensburg, အနောက် Liberty, Cedarville, တောင်ပိုင်း Bloomingville, Clifton, Nashport, ဂျိမ်းစ်တောင်း, နယူး Lexington, နယူး Bloomington, Fultonham, Bowersville, Frazeysburg, ဆဗီးနား, Shauck, ကယ်လီဒိုနီးယား, Greenfield, Bourneville, တောင်ပိုင်းလမ်, La Rue, အရှေ့ Fultonham, နယူး Straitsville, White ကအိမ်တွင်း, တောင်ပေါ်ကအောင်ပွဲခံ, အဘိဓါန် Shawnee, Howard, အဝါရောင် Springs, ရစ်ချ်ဝေးမောင်နှံ, Bellefontaine, Londonderry, Reesville, ပြည်ထောင်စုအရည်ကျိုမီးဖို, Haydenville, Rushsylvania, Creole အဘိဓါန်, Wilberforce, မြောက်ကိုရီးယား Hampton, Enon, Donnelsville, ဆိပ်ကမ်းဝီလျံ, Roseville, Crooksville, Martel, Walhonding, Bellville, Moxahala, haversack, ကာဗွန်ဟေးလ်, စိန့်ပဲရစ်, Leesburg, ဘဏ္ဍာစိုး, နယူး Plymouth, Iberia, Xenia, Danville, Zanesville, Bainbridge, အဘိဓါန် Highland, Galion, Richmond Dale, Dresden, Rosewood, Lees Creek အဘိဓါန်, က de Graff, နယူး Carlisle, Corning, Trinway, Carbondale, Mansfield, Murray စီးတီး, Nelsonville, Medway, Harpster, Christiansburg, Fairborn, ရောင်ခြည်, Buchtel, Conover, Huntsville, မက်က်အာ, Belle ရေးစင်တာ, ချောက်ကမ်းပါး Haven, ဝီလ်မင်တန်, Quincy, Kenton, alpha, Dayton, ဝါဆော, နယူးဗီယင်နာ, Zaleski, ဖီလို, Casstown, မြောက်အမေရိကရော်ဘင်ဆင်, Cynthiana, Waverly, Russell ပွိုင့်, Duncan ကရေတံခွန်, Chester, Glouster, Lewistown, Bucyrus, Crestline, Pemberton, နီဗားဒါး, Trimble, နယူး Marshfield, အွန်တာရီယို, Jacksonville, ဖလက်ချာ, နွေဦးချိုင့်, လူးကပ်စ, Glenmont, Conesville, Perrysville, အပြာရောင်ရော့ခ်, Millfield, Chauncey, Lakeview, Adamsville, Oceola, Hamden, Blissfield, Martinsville, Bellbrook, အထက် Sandusky, ကျူးဘား, အဆိုပါ Plains, Roundhead, Harveysburg, Tipp စီးတီး, Maplewood, မော်လ်တာ, Loudonville, Kirby, Coalton, ဆိပ်ကမ်းဂျက်ဖာဆန်, သစ်တော, Latham, Chandlersville, Hillsboro, Wellston, Killbuck, Coshocton, Waynesville, Nashville, ဂျက်ဆင်စင်တာတွင်, New Hampshire, နစ်မြုပ်နွေ, Clarksville, mc Guffey, Sidney, အေသင်, စိတ်အားထက်သန်, Sharpsburg, Midlands, Waynesfield, Dunkirk, Lakeville, Wilkesville, Wharton, Alger, Oregonia, Dola, Big Prairie, Lynchburg, အယ်လ်ဘာနီ, Amesville, Chesterhill, Buford, Hayesville, Williamstown, Blanchester, ရှိ, Harrod ကုန်တိုက်, Botkins, Millersburg, Shreve, Jeromesville, Ashland, Uniopolis, နက်ဖြန်နေ့, Saint John, Holmesville, Stewart က, Bartlett, Fayetteville, Langville, Lafayette, သာယာသောရိုးရိုး, Wapakoneta, အရိပ်, Guysville, RUTLAND, လီမာ, ဂေါရှင်, Fredericksburg, ရေချိုးကန်, Newtonsville, Beaverdam, Pomeroy, မာရသွန်, Wooster, Coolville, Williamsburg, ကိုင်ရို, Owensville, Reedsville, ဘာတာဗီးယား, long ကအောက်, Smithville, ဂေါမာ. ဘော်လ်တန်ကွင်းဆင်းကိုလံဘတ်ဒေသဆိုင်ရာလေဆိပ်အာဏာပိုင်မှာ http://columbusairports.com/general-aviation/bolton-field/
ပုဂ္ဂလိကဂျက်လေယာဉ် Cleveland ငှားရမ်း